How To Whiten Teeth | सेतो दाँत गाइड गर्न सर्वश्रेष्ठ बाटो
पोस्ट ट्याग "दाँत कसरी सेतो गर्न"
कसरी दाँत छिटो र काम सेतो गर्न!
त्यहाँ थुप्रै तरिकाहरू एक व्यक्ति लागि रोज्न सक्नुहुन्छ छन्, मा कसरी दाँत कसरी सेतो गर्न. भएको सफा, सेतो दाँत ठूलो सम्झौता हो. जब आफ्नो दाँत आफ्नो सबै भन्दा राम्रो देख रहे, तपाईं आफैलाई र थप विश्वस्त बारेमा राम्रो महसुस, संसारको लिन तयार. अर्कोतर्फ, dingy पहेंलो दाँत संग, तपाईं असुरक्षित महसुस गर्न सुरु र छैन पनि मुस्कान गर्न सक्नुहुन्छ. समयको क्रमसँगै, आफ्नो दाँत मात्र तपाईं दांत र तिनीहरूलाई brightening तिर उचित कदम चाल्न छैन भने खराब प्राप्त गर्न जाँदैछन्.
सेतो दाँत प्राप्त गर्न, तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ पहिलो चरण दाँत कसरी सेतो गर्न एक दांत संस्करण लागि आफ्नो नियमित टूथपेस्ट अप स्विच छ. यो टूथपेस्ट थपियो सामाग्री समावेश, कि काम whitening उत्पादनहरु आफ्नो दाँत बन्द दाग हटाउन, तिनीहरूलाई छोडेर अघि भन्दा brighter र Whiter देख. यी टूथपेस्ट सामान्यतया आफ्नो नियमित टूथपेस्ट जस्तै मूल्य हो, तर तपाईं पनि केही प्रयोगहरू पछि नाटकीय परिणाम दिन सक्छ.
सेतो स्ट्रिप्स उत्पादनहरु सधैं धेरै लोकप्रिय छन्. तपाईं सिक्न चाहन्छन् भने दाँत कसरी सेतो गर्न, आफैलाई लागि प्रयास सेतो स्ट्रिप्स बाहिर र तिनीहरूले गर्न सक्छन् के फरक देख्न. सबैभन्दा सेतो स्ट्रिप्स उत्पादनहरु समावेश दस बीस गर्न स्ट्रिप्स, र यो सामान्यतया तपाईंले सबै स्ट्रिप्स प्रयोग गरेका छन् नगरेसम्म एक दिन प्रयोग गर्ने सुझाव छ. त्यो समय को अन्तसम्ममा, तपाईं आफ्नो दाँत को अवस्थामा एक महत्वपूर्ण सुधार र रंग याद गर्न सक्षम हुनुपर्छ.
अर्को बाटो पनि छ दाँत कसरी सेतो गर्न जो प्रक्रिया दांत लेजर दाँत छ, एक कस्मेटिक प्रक्रिया आफ्नो दन्त चिकित्सक कार्यालय वा एक मा प्रदर्शन लेजर दाँत whitening, केन्द्र. यो प्रक्रिया सबै दाँत विधिहरू दांत को सबैभन्दा नाटकीय परिणाम दिन्छ, लगभग तुरुन्त दुई वा बढी रंग आफ्नो दाँत दांत. साथै दाँत विरंजन रूपमा चिनिने, यो प्रक्रिया एकदम संसारभरि लोकप्रिय छ, विधिहरू दांत सबैभन्दा प्रभावकारी दाँत रूपमा. यो प्रक्रिया महिनामा, विशेष जेल आफ्नो दाँत माथि लागू, जो पछि लेजर प्रकाश जेल प्रयोग गरिन्छ, यसलाई सक्रिय र फलस्वरूप आफ्नो दाँत दांत.
सिक्ने दाँत कसरी सेतो गर्न एक विशाल चुनौती हुन छैन. यति धेरै प्रभावकारी दाँत whitening, विधिहरू संग, के तपाईं उज्ज्वल दिन लागि काम गर्दछ कि एक तरिका पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईं सधैं को सपना देख्यो सेतो मुस्कान. यो आफ्नो दाँत बन्द बाट कठिन दाग हटाउन तपाईंले एक भाग्य खर्च गर्न छैन र नाटकीय आफ्नो मुस्कान सुधार. यो brighter आफ्नो दाँत, अधिक तपाईं मुस्कान चाहनुहुन्छ, र तपाईं राम्रो महसुस हुँदा तपाईं राम्रो.
इन्टरनेट सबै भन्दा राम्रो स्रोत तरिकाहरू हेर्दा तपाईंले प्रयोग गर्न को लागि हो दाँत कसरी सेतो गर्न. तपाईं बिल्कुल राम्रो तरिका सन्दर्भमा विवरण धेरै भेला हुनेछ दाँत कसरी सेतो गर्न र पक्कै पनि कि brighter र Whiter दाँत गर्न थाह अर्थमा गर्नेछ सबैलाई एक लाभ छ, यसरी तपाईं सक्छ तपाईं सबै भन्दा राम्रो मुस्कान छ कि यो हेर्न.
सेतो दाँत गाइड पोस्ट - जुन 5, 2016 12 मा:04 AM
विभाग: घर आधारित सेतो दाँत गर्न ट्याग: दाँत कसरी सेतो गर्न, लेजर दाँत whitening,, दाँत whitening,, सेतो दाँत, घरमा सेतो दाँत